Askari ka baxsaday Kuuriyada Waqooyi oo laga heley gooryaankii ugu weynaa! - BBC News Somali
Askari ka baxsaday Kuuriyada Waqooyi oo laga heley gooryaankii ugu weynaa!
Image caption Gooryaan dhan 21 cm dherer
Dhaqaatiirta daweynaya askari kasoo baxsaday Kuuriyada Waqooyi ayaa warbaahinta u sheegay in ay arkeen wixii ugu layaabka badnaa ebed oo aan waligeed adduunka laga sheegin.
Dr Lee Cook-jong oo u dhashay Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in ay caloosha askariga kasoo saareen gooryaan aad u weyn, una dheer "Waligeey maanan arag wax la mid ah mudadii 20-ka sano ahayd ee aan dhaqtarka ahaa, waxaan kasoo saarnay gooryaan dherarkiisu dhanyahay 27cm" ayuu intaas ku daray.
Gooryaanka ayaa waxa uu dadka ku galaa haddii ay cunaan cunto wasaqaysan oo cayayaanka ay cuneen, ama gooryaanka laftiisaba uu jirka qofka u duso si uun.
Dhulgariir laga dareemay Kuuriyada Waqooyi
Myeshia Johnson, carmalad askari ka dhintay "Trump wuu iga oohiyey"
Kuuriyada Waqooyi ayaa la sheegay in ay wali saxarada dadka u isticmaalaan in ay ku bacrimiyaan beeraha, taas oo haddii aanan si wanaagsan loo nadiifinin keeni karta xanuuno, gooryaana uu ka dhalan karo.
Image caption Askariga ka baxsaday Kuuriyada Waqooyi oo goob caafimaad la geeynayo
Sida uu sharaxayo Prof Peter Preiser oo ka tirsan mac-hadka culuumka seeyniska ee jaamacadda Singapore, gooryaanka ayaa inkasta oo uu intiisa badan halis ahayn, haddane qaarkood nafta halis galin kara.
"Waxa ay jirka ka dhuuqaan nafaqada oo dhan, waxana ay qofka ku sababi karaan caafimaad darro" ayuu yiri Prof Peter.
Cilmi baaris lagu sameeyay dadka Kuuriyada Waqooyi kasoo baxsaday ayaa lagu ogaaday in badankood ay qabaan xanuuno iyo xaalado kale oo caafimaad darro ah, waxayna tani muujinaysa dhibaatada haysata dadka dalkaasi go'doonka ah.
Image caption Dr Lee Cook-jong ayaa sheegay in uusan wax la mid ah arkin muddo 20 sano oo uu dhaqtar ahaa
Askarigan ayaa shan xabadood lagu dhuftay isaga oo kasii baxsanaya askarta Kuuriyada Waqooyi ee difaaca kaga jira xuduuda ay la wadaagaan Kuuriyada Koonfureed ee aanan la isaga talaabin.